The Kpop Times Media - ကံနိမ့်ခဲ့လို့ ဆိုးဆိုးရွားရွားစွပ်စွဲမှုတွေနဲ့ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ အပြစ်ကင်းသူ Idol များ
ကံနိမ့်ခဲ့လို့ ဆိုးဆိုးရွားရွားစွပ်စွဲမှုတွေနဲ့ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ အပြစ်ကင်းသူ Idol များ
တချို့ idolတွေဟာ သူတို့ဖြူစင်ကြပေမယ့် ဆိုးဝါးစွာ စွပ်စွဲခံရတာတွေရှိပါတယ်။
1.Onew ရဲ့ ကလပ်ဂယက်
၂၀၁၇ ခုနှစ်တုန်းက SHINee ရဲ့ Onew ဟာ ကလပ်မှာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုနဲ့စွပ်စွဲခံခဲ့ရပါတယ်။သူဟာ Gangnam က ကလပ်တစ်ခုမှာအဲ့ဒီလိုကျူးလွန်ခဲ့တာလို့ စွပ်စွဲခံခဲ့ရတာပါ။ အဲ့ဒီသတင်းက ထိတ်လန့်စေခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီအမျိုးသမီးပြောခဲ့တာက သူနဲ့သူငယ်ချင်းကို တစ်စုံတစ်ယောက်ကဟိုကိုင်ဒီကိုင်လုပ်ခဲ့ပြီး အဲ့ဒါက Onewပါတဲ့။ ရဲတွေက ၅နာရီလောက်ကြာအောင် မေးခွန်းတွေမေးခဲ့ပြီး Onewကို တရားစွဲခဲ့ပါတယ်။ SM ကတော့ ဒါဟာအထင်လွဲမှုပဲဖြစ်ကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။
SMပြောခဲ့တာက "အခု သတင်းတွေကပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေအပေါ်ဖြေရှင်းချက်ပေးချင်ပါတယ်။ Onew အတွက်မကောင်းတဲ့သတင်းတွေထွက်နေတယ်။ဒါက လူအများကြီးကိုစိတ်ပူစေတယ်။Onew က ကလပ်မှာ သြဂုတ် ၁၂ ရက်နေ့က မနက်က သူ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ ကလပ်မှာ DJ အဖြစ်ဆောင်ရွက်နေတာပါ။သူအရက်သောက်ပြီး ကတဲ့အချိန်မှာ သူက ဘေးနားကလူတွေနဲ့အတူကရုံတင်ပါ။အဲ့ဒါ ကြောင့်အထင်လွဲသွားကြတာ။ ဒါကြောင့် သူက အစစ်ဆေးခံနေရပြီး မှတ်မိသလောက်ကတော့ အရက်ကြောင့် ဖြစ်တာဖြစ်ပြီး နားလည်မှုလွဲတာပါ။ အပြစ်မပေးဘဲ စွဲချက်တွေကိုပြန်ရုတ်သိမ်းမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။တခြားသတင်းတွေဖြန့်နေတာကိုရှောင်ပေးကြပါ။အားလုံးရဲ့အဆင်မပြေမှုတွေအတွက် တောင်းပန်ပါတယ်။"ဆို ပြီးပြောခဲ့တာပါ။
SMက အဲ့ဒီလိုပြောပေမယ့် အထောက်အထားမရှိစွပ်စွဲမှုတွေကြောင့် Onew ရဲ့သတင်းဟာပိုဆိုးခဲ့ပြီး နောက်တစ်နေ့မှာပဲ တရားစွဲသူဟာ SM ကနေ သူ့ကို အမှုရုတ်သိမ်းဖို့ အကျပ်ကိုင်ခဲ့တယ် လို့စွပ်စွဲခဲ့ပြန်ပါတယ်။ Onew က အရက်အရမ်းမူးနေလို့ လုပ်ခဲ့တာ ဆိုပြီးဆက်ပြောနေပေမယ့် SM က တောင်းဆိုတာကြောင့်အမှုရုတ်သိမ်း ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမယ့် သူပြောခဲ့တာက အမှန်တရားက မပြောင်းလဲပါဘူးတဲ့။ အဲ့ဒီသတင်းက တစ်လလောက်ငြိမ်သွားပြီး Onewဟာ သူ့ကြောင့်နာကျင်ခဲ့ရတဲ့ပရိသတ်တွေကိုတောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။တချို့ကတော့ သူ့ကိုသံသယဆက်ဝင်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့က အဖွဲ့ထဲကနေထွက်ဖို့တောင် တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Onew ကတော့မလုပ်ခဲ့ပါဘူး။၂၀၁၈ ခုနှစ် အစပိုင်းမှာတော့ သူဟာအပြစ်ကင်းပြီး စွဲချက်တွေဟာမှားယွင်းကြောင်း ပြသနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
2.Yoochunရဲ့ မုဒိန်းကျင့်ခဲ့ကြောင်းစွပ်စွဲခံရမှု .
JYJ အဖွဲ့ဝင် Yoochun ကလည်း ၂၀၁၆ တုန်းက အဲ့ဒီလိုအစွပ်စွဲခံခဲ့ရဖူးပါတယ်။ ဇွန်လမှာ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်က သူအလုပ်လုပ်နေတဲ့ ဘားက ရေချိုးခန်းထဲမှာ Yoochun ဟာ သူ့ကိုမုဒိန်းကျင့်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်လို့စွပ်စွဲခဲ့ပါတယ်။ စွပ်စွဲချက်တွေအပြင် အဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့ ရည်းစားကပါ အမျိုးသမီးရဲ့အခင်းဖြစ်စဉ်က အောက်ခံဘောင်းဘီနဲ့ အကျီၤတွေကို ရဲတွေဆီ သက်သေအဖြစ် ပို့ခဲ့ပါတယ်။ တခြားအမျိုးသမီးသုံးယောက်ကလည်း သူ့တို့ကို အဲ့ဒီလိုမျိုး Yoochun ကလုပ်တယ်လို့ထွက်ဆိုကြပါသေးတယ်။ စစ်ဆေးနေစဉ်အတွင်းမှာ ပထမဆုံးစွပ်စွဲတဲ့အမျိုးသမီးဟာ Yoochun ရဲ့ကုမ္ပဏီကို ဆက်သွယ်ခဲ့ဲပြီး ငွေရေးကြေးရေးစကားပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒါကိုရဲတွေရဲ့တင်ပြချက်ထဲထည့်ထားပါတယ်။
နောက်ထပ် သူနဲ့စကားပြောပြီးတော့ သူတို့က အရွယ်ရောက်ပြီးသားလူတွေအတွက် လိုက်လျောနိုင်တဲ့ ပတ်သက်မှုတစ်ခုရှိတယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။Yoochun ရဲ့ အပြစ်ကင်းစင်မှုက ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီး ပထမဆုံးအမျိုးသမီးကို လိမ်လည်ထွက်ဆိုမှု ခြိမ်းခြောက်ငွေတောင်းမှုတို့နဲ့ဖမ်းဆီးခဲ့ရပါတယ်။သူက စိတ်မသက်မသာဖြစ်ခဲ့ရပြီး ထောင်ဒဏ်နှစ်နှစ်ချခံခဲ့ရပါတယ်။
အခြားအမျိုးသမီးသုံးယောက်မှာ နှစ်ယောက်ရဲ့ အမှုဖြစ်စဉ်တုန်းက Yoochun ဟာ တရုတ်ကိုရောက်နေတာကြောင့် စွပ်စွဲမှုဖြစ်စဉ်အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ယောက်မှာတော့ အဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့ ပြောစကားတွေကနေ Yoochun ရဲ့အပြစ်ကင်းမှုကိုရှာတွေ့ပြီး သက်သေပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
3.Lee Min Kiရဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်စော်ကားကြောင်းစွပ်စွဲခံရမှု
၂၀၁၆တုန်းကပါပဲ။ကိုရီးယားသတင်းဌာန Sports Chosun ကနေပြောကြားချက်အရ Lee Min Ki က အဲ့လိုစွပ်စွဲခံရတယ်ဆိုတာသိခဲ့ရပါတယ်။ပြောကြားချက်အရ Lee ဟာ စစ်မှုထမ်းနေတုန်း ကလပ် ကိုသွားခဲ့တာပါတဲ့။
နှစ်ရက်အကြာမှာတော့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှုနဲ့ သူ့ကို တိုင်ကြားခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရှိခဲ့ပါတယ်တဲ့။ Lee ပါဝင်ခဲ့မယ်လို့ ပိုသံသယရှိခဲ့တာကြောင့် ခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့ပြီး တော်တော်ဆိုးဝါးခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာ သူ မပါဝင်ကြောင်းသက်သေပြနိုင်ခဲ့ဲပြီး အမျိုးသမီးကတောင်းပန်ခံခဲ့ရပါတယ်။
4.Tzuyuရဲ့ လူမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီး သိက္ခာကျဖွယ်ဖြစ်ရပ်
သူအသက် ၁၆ နှစ်လောက်ပဲရှိဦးမှာပါ။ TWICE ရဲ့ Tzuyu ဟာ သူ့လုပ်ရပ်အတွက် မကောင်းပြောခံခဲ့ရပါတယ်။ ၂၀၁၅တုန်းက My Little Televisionဆို တဲ့အစီအစဉ်မှာ TWICE အဖွဲ့ဝင်တွေဟာ ကိုယ်စားပြု အလံလေးတွေကိုကိုင်ထားကြပါတယ်။ Tzuyu ဟာ တရုတ်အလံကိုကိုင်ထားပြီး ထိုင်ဝမ်လို နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီလုပ်ရပ်ဟာ တရုတ်အခြေပြု ထိုင်ဝမ်အဆိုတော် Huang An က Tzuyu ဟာ ထိုင်ဝမ်လွတ်လပ်ဖို့ လှုပ်ရှားသူအဖြစ်ပြောစရာရ်ှိခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီအခါမှာ သူဟာဆိုးရွားစွာ အဝေဖန်ခံခဲ့ရပါတယ်။ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံအလံကို ဘယ်ဘက်မှာကိုင်ထားပြီး ထိုင်ဝမ်အလံကို ညာဘက်မှာကိုင်ထားတာပါ။
ပြည်မကြီးတရုတ်တွေဟာ ထိုင်ဝမ်ကို သူတို့လက်အောက်ခံလို့ယူဆကြပြီး ထိုင်ဝမ်ကတော့ လွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံအဖြစ် Republic of China ဆိုပြီး ရပ်တည်နေတာပါ။ အဖွဲ့ရဲ့ဖျော်ဖြေမှုတွေကိုတောင်ရပ်ဆိုင်းခံခဲ့ရပါ်တယ်။ Tzuyu ကတော့ နောက်မကြာခင်ပဲတောင်းပန်ခဲ့ပြီး အကုန်လုံးက တစ်သားတည်းလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ သူပြောခဲ့တာက "အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ ကျွန်မအကုန်လုံးကိုတစ်ခုပြောစရာရှိပါတယ်။ကျွန်မက Chou Tzuyu ပါ။ ဒီထက်စောစောတောင်းပန်ချင်ပေမယ့် ဘယ်လိုမျက်နှာချင်းဆိုင်ရမယ်ဆိုတာမသိလို့ပါ။ အကုန်လုံးကို မျက်နှာချင်းမဆိုင်ရဲတာကြောင့် အခုလိုပဲပြောလိုက်တာပါ။ တရုတ်ဆိုတာတစ်ခုပဲရှိပါတယ်။တရုတ်ဖြစ်ရတာကိုဂုဏ်ယူပါတယ်။ကျွန်မရဲ့စကားကကုမ္ပဏီကိုရော တရုတ်ပြည်သူတွေကိုရောထိခိုက်နာကျင်စေတာသိပါတယ်။တကယ်ကိုတောင်းပန်ပါတယ်။စိတ်မသက်မသာခံစားရပါတယ်။အခုလောလောဆယ် တရုတ်က အလုပ်တွေမှာကျွန်မ မပါဝင်သေးပါဘူး။အကုန်လုံးကိုတကယ်တောင်းပန်ပါတယ်။"ဆိုပြီးပြောခဲ့ပါတယ်။
JYP ဖျော်ဖြေရေးကုမ္ပဏီရဲ့တည်ထောင်သူ J.Y.Park ကလည်း "အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ ကျွန်တော်က J.Y. Park ပါ။ ဒီကိစ္စအတွက်တကယ်တောင်းပန်ပါတယ်။ ဒီလောက်ထိဆိုးဝါးမယ်လို့မထင်ခဲ့မိတာနောင်တရပါတယ်။ ဒီကိစ္စကနေ နိုင်ငံတွေကိုပူးပေါင်းပြီး အနုပညာလုပ်တဲ့အခါ နိုင်ငံရေးအခြေအနေ ယဉ်ကျေးမှု သမိုင်းကြောင်း လူတွေရဲ့ခံစားချက်တွေကိုသတိထားရမယ်ဆိုတာ သိသွားပါပြီ။ ဒါက ကုမ္ပဏီနဲ့ သူ့ကို တော်တော်သင်ပေးလိုက်တာပါပဲ။ ဒီလိုအဖြစ်အပျက်မျိုးထပ်မဖြစ်စေရပါဘူး။တရုတ်ကပရိသတ်တွေကိုလည်း တောင်းပန်ပါတယ်။ ယဉ်ကျေးမှုဖလှယ်ဖို့ ပိုပြီးကြိုးစားပါမယ်။ Tzuyu ကလည်း တော်တော်ခံစားသွားရတာပါ။ သူတရုတ်ကလာတော့ ၁၃နှစ်ပဲရှိသေးတာလေ။သူ့ရဲ့ မျိုးရိုးအမူအကျင့်ကိုကောင်းကောင်းသင်ပေးဖို့ ကျွန်တော်တို့ပျက်ကွက်ခဲ့မိတာပါ။Tzuyu ကို တရုတ်မှာဖျော်ဖြေဖို့ခဏရပ်နားပြီး ဒီကိစ္စကိုထိထိရောက်ရောက်ဖြေရှင်းဖို့ ကြိုးစားမှာပါ။" ဆိုပြီးတောင်းပန်ခဲ့တာ အောင်မြင်ခဲ့ပုံပါပဲ။
၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇွန်လတုန်းက NU'EST W ရဲ့ Baekho ဟာ သူ့ကို ၂၀၀၉တုန်းက လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စော်ကားဖူးတယ်လို့ စွပ်စွဲခဲ့သူတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ သူက သက်သေမျိုးစုံလုပ်ခဲ့ပြီး Baekho နဲ့ Kakao Talk ကနေပြောထားတာတွေတောင်ပြခဲ့ပါတယ်။ Pledis ဖျော်ဖြေရေးကုမ္ပဏီကတော့ စွပ်စွဲချက်တွေကမမှန်ကြောင်း ငြင်းဆိုပြီး မကြာခင်မှာပဲ စုံစမ်းမှုစတင်ခဲ့ပါတယ်။ ၈ လလောက်အကြာမှာတော့ Beakho ကအပြစ်ကင်းကြောင်း ပြသနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
6.Kai ရဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုစွပ်စွဲခံရချက်
EXO ရဲ့ Kai မဟုတ်ပါဘူး။မမှားကြပါနဲ့။ပြဇာတ်သရုပ်ဆောင်နဲ့အဆိုတော် Kai ပါ။ သူကလည်း ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံတွေပရိသတ်တွေဆီကိုပို့တယ်လို့စွပ်စွဲခံခဲ့ရတာပါ။ သူ့အေဂျင်စီကတော့ ငြင်းဆိုထားတာပါ။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီအကောင့်က အတုလို့ရှာတွေ့ခဲ့တာကြောင့်အပြစ်ကင်းကြောင်းပြနိုင်ခဲ့ပြီး သူ့ အေဂျင်စီက ဒီကိစ္စအပေါ်တရားစွဲမယ်လို့ ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
7.Jisooရဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောက်ယှက်မှု မုဒိမ်းမှု စသည်ဖြင့် စွပ်စွဲခံရမှု
၂၀၁၄ ခုနှစ်တုန်းက Lovelyz ရဲ့ Jisoo ဟာ လန့်စရာ စွပ်စွဲမှုတွေနဲ့ ကြုံခဲ့ရပါတယ်။ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်က သူဟာ Jisoo နဲ့ လိင်တူအချစ်ဆက်ဆံရေး တစ်ခုရှိပြီး သူ့ကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောက်ယှက်မှုပေးခဲ့ပါတယ်တဲ့။ မကြာခင်တခြားလူတွေကလည်း တင်ခဲ့ပါတယ် အဲ့ဒီအကြောင်းကို။စွပ်စွဲချက်က မုဒိမ်းမှုအဖြစ်ပါပြောင်းသွားပြီး Jisoo ကိုအလုပ်ဆက်လုပ်မရလောက်အောင်ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ Woollim ဖျော်ဖြေရေး ကုမ္ပဏီဟာ ဒီကိစ္စကိုစုံစမ်းပေးဖို့ သတင်းမှားဖြန့်တဲ့သူကိုအရေးယူပေးဖို့ရဲဋ္ဌာနကိုပြောခဲ့ရပါတယ်။ ရဲတွေကဖြစ်နိုင်ချေသုံးယောက်ကိုရှာတွေ့ခဲ့ကြပါ်တယ်။ သုံးလလောက်ကြာတော့ တစ်ယောက်ချင်းစီနဲ့ တရားရင်ဆိုင်ခဲ့ပြီး အဲ့သုံးယောက်ကမဟုတ်ခဲ့ပေမယ့် Woollim ကတော့ဆက်ရှာဖွေခဲ့ပါတယ်။ "မကြာသေးခင်က တရားပြိုင်တွေနဲ့တရားရင်ဆိုင်ခဲ့တယ်။သူတို့က အင်တာနက်မှာအထင်မှားအောင်ပြောခဲ့ကြတာပဲ။သူတို့ကိုတရားသေလွှတ်ခဲ့ပေမယ့် တရားခံကိုမမိတာက Jisoo ကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေတယ်။ပုန်းကွယ်နေတဲ့အမှန်တရားကိုမရရအောင်ဖော်ထုတ်မယ်"ဆိုပြီးပြောခဲ့ပါတယ်။
More in Others Section « ၁၉၉၃ ခုနှစ်ဖွား အကောင်းဆုံး သရုပ်ဆောင်မင်းသားများ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်မင်းသားတွေနဲ့ လက်ထပ်ခဲ့ကြတဲ့ နာမည်ကျော် မင်းသမီးများ »